Uhlu lwezinombolo zefoni laseChina | Izinhlu Zomakhalekhukhwini | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwezinombolo zefoni laseChina
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zefoni laseChina
China Ucingo Izinombolo
Uhlu lwezinombolo zefoni lwaseChina lusebenzisa ngqo ukukhangisa kweselula nokuhamba noma umkhankaso we-SMS ngobuningi. Sinika futhi, uhlu lwabasebenzisi bekhwalithi ephezulu. Thenga uhlu lwezinombolo zefoni laseChina bese uqala ibhizinisi lakho bese uthumela okunikezwayo. Thola uhlu olusezingeni eliphezulu lwe-telemarketing ikhasimende elisha ku-chain.
Idathabheyili Yokugcina Yamahhala inendlela elula, engabizi yokuxhumana namathemba aqondisiwe futhi ukuphela kwendlela yokumaketha eqondile enikeza impendulo ngokushesha. Siluhlu lwedatha ye-telemarketing ngokumelene nomunye ukuze siqonde ukuxhumana kwe-ROI. Yenza i-oda lakho ngokwezifiso ukuxhumana nathi. Thola isampula yamahhala yokuzama umuntu wakho waseChina oqondiswe ngqo.
Thenga i-China Consumer People Ucingo Uhlu
Izinombolo Zefoni Zonke: 2 Million
Uhlu Lwezingcingo Lwabathengi baseChina
Uhlu lwabasebenzisi befoni baseChina noma uhlu lwezinombolo zeselula luhlu olungaguquki lohlu lwefoni kusuka kubathengi abathile. Lolu hlu lwezinombolo zocingo lwabathengi lunesethi engaguquki yabemukeli engathola kuphela lolu hlu lwebhizinisi olusebenzayo futhi oluqinisekisiwe eChina olufakwe kuhlu, indlela efanelekile futhi engokoqobo yokuthola uhlu lwefoni olungile lwabathengi.
Database Lokungena Kamuva noma isayithi lakamuva ledatabase.com lithola okubaluleke kakhulu ukuhlinzeka ngokufanele, ukufinyelela okusheshayo, amabhizinisi amaningi ongafinyelela kuwo ukuze wena noma inkampani yakho nithengise. Lokhu kungenza insizakalo yamakhasimende ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka, ukwenza inkampani yakho iqhubeke yathuthukisa ukuze ibhizinisi lakho liphumelele.
Uhlu lwabasebenzisi befoni baseChina China noma uhlu lwenombolo yeselula lwaqedwa kahle futhi kwenziwa ucwaningo ngabasebenzi bethu ezimakethe ezithile eziqondiwe futhi benza inkampani yakho yabonwa kakhulu ngabantu noma izinkampani.I-Database Latest Mailing noma i-latestdatabase.com inika ibhizinisi lakho idinga inombolo yocingo evuselelwe yomkhathi ngamunye obhekisiwe , isidingo sokuthola ngezinombolo eziphansi zamanani wabathengi okuholela kodwa ngekhwalithi ephezulu.
Uhla lwabasebenzisi befoni baseChina eChina noma uhlu lwenombolo yeselula olusuka kuDatha Yokugcina Ye-Mailing noma i-latestdatabase.com iqukethe ama-2 Million avuselelwe amarekhodi afanele ohlu lwebhizinisi lwebhizinisi afinyelela ku- $ 9,000, ongawathenga ngokukhokha ngesinye isikhathi kanye nesoftware elandelwayo engaba i-Excel CSV uhlobo lwefayela, ongalukhokha ngekhadi eliphakeme, i-paypal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa, inyunyana yasentshonalanga nezindlela ezikhokhelayo.
China Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo